Anya Realme X zuru oke na-apụta na teaser ọhụrụ ya | Androidsis
New Realme X teaser na-akwado nkwenye 'ihuenyo niile' ya na atụmatụ ndị ọzọ
Realme dị njikere ibido Realme X ama na a ihe omume na China ma emechaa izu a. Ka igba egbe ahụ na-eru nso, ụlọ ọrụ na-ekekọrịta ọtụtụ nkọwa banyere etiti a. adịchaghị.
Mgbe o kpughere ụfọdụ nkọwa ekwentị, Realme abanyela Realase X teaser ọhụrụ na ntanetị Ọ na-ekpughe atụmatụ nke ekwentị n'ebube ya niile. Nke a na - egosi na ọ ga - abịa na sọftụl igwefoto dị mma maka selfies na atụmatụ ndị ọzọ.
Nke a bụ ihe Realme X dị ka ya
Realme X akwụkwọ mmado
Ihe oyiyi ahụ ekesara na Realme X ngwaọrụ dị na nhọrọ agba agba gradient abụọ: acha anụnụ anụnụ na ọcha. Enweghị ihe mmetụta mkpịsị aka na azụ azụ, nke na-egosi na ekwentị ahụ ga-enwe ihe mmetụta mkpịsị aka na-egosipụta, dị ka ekwuru.
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ kwadoro na ọ ga-eji ya ọgbọ na-abịa ngwa anya na-ngosi mkpisiaka mmetụta; Nke a na-arụ ọrụ na mpaghara 44% sara mbara, yabụ anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla mgbe anyị na-etinye mkpịsị aka anyị na ya iji kpọghee ngwaọrụ ahụ. N'ihi igwefoto n'ihu n'ihu, ọ dịghị ọkwa dị na ihuenyo ahụ yabụ ekwentị na-enye ọkwa ngebichi na ahụ dị elu.
Dabere na akụkọ ndị gara aga, Realme X ga-abịa na a 6.5-anụ ọhịa AMOLED ihuenyo nke ga-enye mkpebi FullHD + nke 2,340 x 1,080 pikselụ. N'okpuru mkpuchi, a ga-eji ngwaọrụ ahụ rụọ ọrụ Snapdragon 710, nke a ga - ejikọta ya na 4GB RAM.
Na azụ, ekwentị ahụ ga - enwe igwefoto mbụ Sony IMX586 48 MP na ihe mmetụta sensọ nke 5 MP, mgbe 16 MP snapper ga-emi odude ke iso. Tụkwasị na nke a, a na-atụ anya na ekwentị ahụ ga-enweta ike site na batrị 3,700 mAh na VOOC 3.0 nkwado ngwa ngwa ma na-ebute ụgwọ na sistemụ arụmọrụ. A gam akporo 9 achịcha dabere na ColorOS 6.0.
Realme na-ekwuputa ọkwa mbụ ya na ahịa ndị China
N'otu mmemme mmemme ahụ, yana Realme X smartphone, ụlọ ọrụ ahụ ga-ebido ya Ezigbo 3 Pro nwere aha ọhụrụ maka ahịa ndị China: Realme X Youth Edition (nke a makwaara dị ka Realme X Lite). Maka ozi na ọnụahịa na nnweta ekwentị, anyị ga-echere maka ụbọchị emume a ga-eme, nke ga-abụ na Mee 15.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » New Realme X teaser na-akwado nkwenye 'ihuenyo niile' ya na atụmatụ ndị ọzọ
Huawei Y9 Prime 2019 bụ ọkwa ugbu a: Igwe dị n'etiti etiti yana igwefoto nwere ike iwepụ
Otu esi ezo njikọ ikpeazụ gị na WhatsApp